वालिङमा घरघरमा तरकारी : ‘धन्यवाद छ ! नगरपालिकालाई’ – Nepali Profile
वालिङमा घरघरमा तरकारी : ‘धन्यवाद छ ! नगरपालिकालाई’
बिशाल अर्याल ४ असार २०७७, 3:36 pm
स्याङ्जा । कोरोना कहरमा पनि वालिङ बजारका नागरिक (उपभोक्ता)हरु घरघरमा नै ताजा तरकारी खरिद गर्न पाए पछि खुशीले गदगद भएका छन् । घरमै सुपथ मुल्यमा नै ताजा तरकारी उपभोग गर्न पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।
वालिङ–८ नयाँबजारका हुम नारायण कोइरालाले भने, ‘यो विषम परिस्थितिमा पनि घर घरमा नै ताजा तरकारी पाउने सौभाग्य हो ।’ घरमै सस्तो मुल्यमा तरकारी किन्न पाएपछि उनी खुशी भए । उनले वालिङ नगरपालिकालाई धन्यवाद समेत दिए ।
यस्तै वालिङ ९ मा लामो समयदेखि बस्दै आएकी शुभद्रा खनाल पनि घरमै आफूलाई आवश्यक पर्ने तरकारी किन्न पाउँदा खुशी छिन् । ‘सधै घर घरमा तरकारी किन्न पाइयोस् है ! सर’ उनले हातमा तरकारी देखाउँदै भनिन्, ‘कोरोना डरले घरभन्दा कतै जान नपरे हुन्थ्यो सर ।’
उनीहरु मात्रै होइन वालिङका धेरै उपभोक्ता निक्के खुशी छन् । लकडाउनमा लामो समयदेखि पसलमा बेच्न राखिएको तरकारी खरिद गर्न बाध्य भएका उनीहरु ताजा तरकारी लिन पाउँदा नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन्छन् । घरघरमा नै तरकारी आए पछि बाहिर हिडिरहनु पर्ने जोखिम समेत कम भएको बताए ।
गाँउगाँउमा उत्पादन भएका कृषि उपजलाई सहज रुपमा उपभोक्ता सम्म पुर्याउने योजना सहित बजारीकणको काम सुरु गरिएको नगरप्रमुख दिलिप प्रताप खाँणले बताए । बिषम परिस्थितीमा पनि कृषकहरुलाई समस्या नपरोस भनेर आफूहरु सचेत रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘कतै कुहिएको छ भने कतै भोकै बस्नु परेको छ । त्यसैले किसानको उत्पादनलाई उपभोक्ता कै घरमा पु¥याउने व्यवस्था गरेका हौं ।’
लकडाउनको लामो अवधिमा वालिङ नगरपालिका, दियालो युएनडिपी नेपाल मिलेर कृषि र हरित ज्योति गौरब कृषि सहकारी मार्फत तरकारी नागरिकको घर घरमा पुर्याइएको हो ।
हरितज्योती गौरब कृषि सहकारीका अध्यक्ष कृष्ण खाँणले दीर्घकालिन रुपमा तरकारी बजारको व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भैरहेको बताए । ‘सहज रुपमा तरकारीजन्य सामाग्री उपभोक्ता सामु पु¥याउने लक्ष्य सहित तरकारी बजार सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं, उनले भने ।
दियालो गैरसरकारी संस्थाको सहजीकरण/व्यवस्थापनमा वालिङ नगरपालिकाका वडा स्तरमा खुलेका संकलन केन्द्र र सहकारी मार्फत कृषि उपज संकलन गरी न्युनतम मुल्यमा बजारमा बेच्ने गरिएको छ । संस्थाका अध्यक्ष कविता गैह्रेले भनिन् ‘संस्थाको अगुवाईमा नगरपालिका भित्रका कृषकहरुलाई आहतमा राहत ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको बताइन् । उनका अनुसार तरकारीलाई जिपमा राखेर घरघरमा पुर्याइएको छ ।